Nhau dzeZimbabwe, 29 Kurume 2019
Bepanhau reHerald Rinobvuma Kuti Raityora Bumbiro reMitemo yeNyika
Bepanhau reHerald rabvuma kuti raiita basa raro rekuburitsa nhau rakakarerekera kuZanu PF musarudzo dzakaitwa gore rapera, rikati richagadzirisa mashandiro aro sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika.
Imbwa Dzobatsira Kutsvaga Mitumbi yeVanhu kuChimanimani neChipinge
Imbwa dzakabva kuSouth Africa dzinonzi dzakwanisa kufunhidza panofungidzirwa kuti pane mitumbi yevanhu vanodarika gumi nevatanhatu kuNgangu kuChimanimani.
PTUZ Inoti Zvikoro Zvakaparadzwa neCyclone Idai Zvichatora Nguva Kugadzirisa
Hurumende inonzi yazivisa kuti zvikoro zvakakanganiswa nedutumopengo Cyclone Idai zvakabva zvatoenda pazororo, uye zvichakurumidzawo kuvhurwa nemasvondo maviri zvichienzaniswa nezvimwe zvikoro.
Vakawanda Vanocherechedza Mwedzi weVanhukadzi Vachikurudzira Kuwaniswa Mikana Yakaenzana
Vanhu vakawanda vaungana muHarare vachicherechedza mwedzi wekurangarira mabasa anoitwa nevanhukadzi vazhinji vachiti zvakakosha kuti paitwe mutemo unoomesera vanhu vasinga tevedzeri zvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika pakuyenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi.
Zanu-PF Yoshorerwa Kupindira Kwayo Kugovewa kweChikafu cheDutumupengo Idai
Bato reZanu-PF riri kupomerwa mhosva yekupindira munyaya dzezvekugoverwa kwechikafu kuChimanimani neChipinge uko kune vanhu vakawirwa nedambudziko redutumupengo Cyclone Idai.
Makomishina eZEC neMapato Vodzidza Mafambisirwo eSarudzo kuSouth Africa
Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission, ZEC, Amai Priscilla Chigumba, vari kutungamira chikwata chine vamiriri vemapato ane nhengo mudare reparamende chiri kushanya kuSouth Africa kunodzidza nezvemafambisirwo esarudzo kubva kusangano rinoona nezvesarudzo munyika iyi.
Varimi veFodya Voshaiswa Mufaro neMutengo weFodya
Murimi wekuKazangarare kuKaroi, VaLast Kawani, vaudza Studio7 kuti vanoona sekuti mitengo yakaderedzwa nenyaya yekuti madhora ekuAmerica haasisina kufanana huremu nemaRTGS dollars.
Zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa Zvotyira Hupenyu Hwazvo
Izvi zvinotevera kurwiswa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinoshanda sevatyairi vemarhorhi mahombe mudunhu reKwaZulu-Natal, zvikuru muguta reDurban, kubva svondo rapera zvichipomerwa mhosva yekutora mabasa.